Wararka - Maalinta Dab-demiska Qaranka
Nofeembar 9-keeda waa Maalinta Dabka Qaranka ee Shiinaha. Muhiimaddiisu waa in lagu baraarujiyo dadka inay yeeshaan wacyigelin ka hortagga dabka iyo in la xuso geesiyaasheena waaweyn - dab-demiyaasha.
ALUTILE Brand All Panel Dimensional Aluminium Core wuxuu ka kooban yahay seddex lakab oo ah xaashi aluminium ah, kaas oo qaata tiknoolajiyada isku xirnaanta qaangaarka ah iyo tan gaarka ah, iyo heerka burburka ee xoogga diirka ayaa ka yar 5% 20 sano.
Fasalka u adkeysiga dabka wuxuu gaari karaa heerka Dabka A2 sida ku cad GB8624-2012 iyo EN13501, tan iyo markii sheygu qaatay 100% Qaabdhismeedka Aluminium. Natiijo ahaan, macaamiisha ayaa ku raaxeysan kara dammaanad qaad aad u sarreeya.
All Panel Dimensional Aluminium Core waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qurxinta darbiyada daahyada birta ah ee dhamaadka-sare ee dhismayaasha dadweynaha iyo kuwa ganacsiga sida garoonka diyaaradaha tareenka xawaaraha sare ku socda, tareenka fudud ee tareenka dhulka hoostiisa mara, matxafka, arkiifiyada, xarunta bandhigga, dhismaha ganacsiga, dhismaha xafiis heerkiisu sarreeyo , hudheel, iwm
ALUTILE Brand All Panel Dimensional Aluminium Muhiimka ah ayaa galbinaya amnigaaga.